jiifka waa meesha aan ku qaataan ugu of waqtigeena, weli sidoo kale waxay noqonaysaa inay la ugu dayacay marka ay timaado qurxinta. maalmahan, lacagta waxaa laga yaabaa in arrin muhiim ah! Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah talooyin weyn u kordha ilaa aad boos lacag ma at dhan!
1.Dib isugu habee! A heshiis cusub oo cusub oo had iyo jeer ka dhigaysa qol dareemaan cusub. Ha ka baqin in ay isku dayaan xaglo cusub oo aad alaabta guriga meel aad sariirta on dadab ah, ama xitaa xaq dhexe ee qolka!
2. Raadi gura aad u cimaamado, garbasaar, ama xataa pillowcases in amaan nidaamka midabka aad.
Waxaad isticmaali kartaa wax aad horay u jilciso top shaqeeyihii ama cidhifka aad nightstand, ama laga yaabee jiifay iwada a quruxsan badan cagta ee sariirta. Haddii aad horey u tuur barkimo on sariirtaada (haddii aadan samayn, waxa la joogaa wakhtigii si ay u xadaan qol kale!) waxa kale oo aad qof huwan karo, kuwaas oo dhar agagaarka barkimo u eegno cusub, oo kaliya pin ammaanka waa in dib.
Jelly Bean Plant (rubrotinctum Sedum) (credit Photo: Wikipedia)
3. Add a warshad si aad qolka. Eeg gurigaaga agagaarka si loo arko haddii mid ka mid ah dhirta aad hadda jira noqon lahaa faraxsanaan qolkaaga aad seexato, ka dibna waxaa halkaas soo guuraan! Haddii aadan heli karin warshad diyaar u dejinta, inaad mid soo! dhirta badan oo la abuuri karaa ka gooyn, mid aad hadda jira goysay, mid ka mid ah saaxiib ha laga yaabaa in aad la gooyaa, ama xataa qaar ka mid ah dhirta dibadda.
Ivy oo groundcovers badan hadh waa goysay aad u wanaagsan. Waxaad xitaa nooleeyaan kartaa carruurnimada yara iyo koraan baradho ah cut, cananaaska, ama dushooda karooto in qanjaruufo! Waayo, weelasha, eegto aad jikada kabadhada.
teapots Old iyo koobabka, fijaan galaas, xataa suxuunta soda ka dhigi kartaa weel gaar ah.
4. Add lagu xusuusan in qolkaaga. Waxaan sii sawirada mid ka mid walba oo ka mid ah carruurta aan marka ay ahaayeen kuwo yar yar ee soo socda si aan sariirta, oo mar kasta waxay iga qosol. Sidee ku saabsan ku deldesheen oo aad ilxidhka arooska ka headboard ah, ama qaabayn aad martiqaad arooska ama jir waraaqaha jacayl?
5.Add caraf. Haddii aadan haysan jabiyay ama foox ay guriga ku, gooyay ilaa qaar ka mid ah qolofka orange iyo oggolaadaan in ay u qalalaan, markaas qas wax kasta oo dhir udgoon aad qabto in aad armaajo. (Waxa kaliya qaadataa qanjaruufo, isku day qorfe, sinjibiil, ama allspice.) Saar aad la jabiyay baaquli furan in aad qolka si uu dhiiri iyo!
Later xagaaga, hubiyo in mid ah ubaxa ee qolka, haddii aadan haysan Ubax ama ubax kale oo carafta leh ee deyrkaaga, daisies wadada urin karaan weyn aad!
Just a isbedel yar yar, wax lacag ah ku lug, oo wanaagsan a, meel fiican ah inaad bilawdo iyo maalin kasta!
articles la xiriira
Waxaad baran karaa By darista Colors Home Arrimaha Gudaha Summer
81713	47 Qolka, Ganacsiga, ubaxa, Beeraha, Houseplant, Plant, Shopping, barkin Tuur
← Cabidda Coffee hoos u dhigi kartaa Khatarta ismiidaaminta! Wolves’ Bey Lagu ID'd karaan kombiyuutarka →